आफ्नो नमिठो विगतबाट कसरी निस्कने ?
तीतो विगत वा जीवनमा कुनै घटनाको नराम्रो अनुभव प्राय: सबै व्यक्तिले गरेका हुन्छन् । तर यस्तो परिस्थति भोग्ने व्यक्ति म मात्रै हूँ भन्ने भ्रम...
आम्दानी बढाउनको लागि केही सजिला उपायहरु
पैसा कमाउने चाहना सबैको हुन्छ। यसको लागि हामीले रात-दिन मेहनत गरिरहेका हुन्छौं। तर खर्च र आम्दानीको हिसाब गर्दै हामी अतिरिक्त आमदानीको खोजीमा हुन्छौं। यहाँ...
राम्रो वक्ता कसरी बन्न सकिन्छ ?
अगाडी गएर आफ्ना विचार राख्ने चाहना सबैजसोको हुन्छ। तर बिग्रिन्छ की भने डर तथा आत्मविश्वासको कमी आदिले गर्दा अगाडी गएर बोल्नको लागि धेरै पछि...
अब्राहम लिंकनका ६ शिक्षा
अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन १२ फेब्रुवरी,१८०९ मा अमेरिकाको हड्गेंभिल्ले केन्टकीमा जन्मिएका थिए । राजनीति देखी टाढा रहेको एक गरिब परिवारको छोरो उनी दुई...
बच्चाहरुको लागि गर्दै नगर्नुस् यी पाँच काम
एम्मा जेनेर बालबालिकाको बालबालिकाको विकास तथा उनीहरुको व्यवहार सम्बन्धि विशेषज्ञ हुन् । बेलायतकी एम्मा किशोरावस्था देखी नै यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेकी थिइन् र अहिले...
सम्बन्धमा गर्न नहुने छ सम्झौता
सम्बन्ध भनेको एक किसिमको सम्झौता पनि हो. एकले अर्कोको खुशीको लागि गरिने सम्झौता। तर कतिपय अवस्थामा, एकजनाले सम्बन्ध बचाउनको लागि सम्झौता गरिरहने तर अर्को...
आफूलाई माया गर्ने व्यक्ति अगाडी बढ्न सक्छ, तर कसरि गर्न सकिन्छ आफूलाई माया?
भनिन्छ अरुलाई माया गर्नुभन्दा पहिले, आफूलाई माया गर्नु जरुरी छ। तयस्तै, आफूलाई माया गर्ने व्यक्ति अगाडी बढ्न सक्छ , तर कसरि गर्न सकिन्छ आफूलाई...